वेबमा सबै सामाजिक नेटवर्कहरू बारे जानकारीको एक टन छ, तर एक आन्दोलन सामाजिक नेटवर्क का केही फाइदाहरू इन्ट्रानेटमा ल्याउनको लागि आन्दोलन गरिएको छ। मैले शीर्षकमा आधा दिन सोशल नेटवर्कि session सेसनमा कुरा गरेको थिएँ IABC हिजो र खोजहरु मा गहिरो ध्यान लिन लायक थियो। जानकारी र स्क्रिनशटहरू फेला पार्न मैले गहिरो खन्नु पर्‍यो, तर त्यहाँ केहि कम छन् स्रोतहरू बाहिर कि इंट्रानेट लक्ष्य.
इन्ट्रानेट वास्तवमा फिजियो र वेब २.० टेक्नोलोजी भन्दा पहिले प्राय कम्पनीहरूमा मर्‍यो। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ, किनकि धेरै कम्पनीहरूले एक विचारमा जमानत गर्छन कहिल्यै यसलाई फिर्ता गर्ने छैन जब यो असफल हुन्छ। मूल इन्ट्रानेटहरू मुख्य वेब पृष्ठ निर्माणकर्ता बाहेक अरू केही थिएन जुन प्रत्येक विभागले समाचार र सूचना पोष्ट गर्न प्रयोग गर्नुपर्‍यो, कुनै स्रोत वा कुनै स्वचालित बिना। माइक्रोसफ्टले शेयरपोइन्ट सुरू गर्‍यो, तर सामग्री स्वत: र कायम राख्नको लागि आवश्यक प्रयास अझै पनि औसत कर्मचारीको सीप स्तर भन्दा माथि थियो।
नेटको समीक्षा गर्दा त्यहाँ धेरै 'स्वादहरू' थिए कि कसरी कम्पनीहरूले उनीहरूको इन्टर्नेट मार्फत सञ्जालहरू डिप्लोय गर्दैछन - र कम्पनीहरूका विशेषताहरू र उनीहरूका उपकरणहरूले बताउँदैछन। कृपया यहाँ मेरो खोजीमा मलाई नलुकाउनुहोस् - किनकि मँ गुगल, माईक्रोसफ्ट, याहू र आईबीएम को लागी सीधा पहुँच छैन, म लेख र स्क्रीनशट संग काम गर्दै छु जुन हप्ताहरु वा बर्ष पुरानो हुन सक्छ!
गुगलको मोमा साधारण खोज ईन्जिन छैन, मोमाले मानव संसाधनलाई अनुक्रमित र पहिचान गर्नका साथै डिजिटल सम्पत्तिहरूको लागि पनि अनुमति दिन्छ। केहि साइटहरूबाट मैले पढेको हो, गुगलसँग समान रूपमा प्रभावशाली वेब आधारित कोड समीक्षा प्रणाली छ, भनिन्छ Mondrian.
हे डग, उपयोगी पोष्ट - मेरो कम्पनीमा हामी Google Apps मा पनि सरेका छौं। यसको सुपर उपयोगी। त्यसैले आन्तरिक च्याट र त्यस्ता चीजहरूको उद्देश्यका लागि यो उत्कृष्ट छ। क्यालेन्डर र कागजातहरू आन्तरिक उद्देश्यका लागि पनि उत्कृष्ट छन्। यद्यपि मैले एउटा सानो गल्ती देखेँ। एक मिडिया कम्पनी भएको कारण, हामी धेरै परियोजनाहरूमा काम गर्छौं र मैले फेला पारेको छु कि म मेरा केही कर्मचारीहरूले मेरा सबै परियोजनाहरूमा जानकारी प्राप्त गर्न चाहन्न। हामीले स्विच गर्यौं डेस्कवे र मैले फेला पारेको छु कि सधैं म अधिक नियन्त्रणमा छु जस्तो लाग्छ। साथै त्यहाँ प्रत्येक परियोजना भित्र साझेदारी सुविधाहरू छन् त्यसैले म ब्लगहरू र फाइलहरू इत्यादि साझेदारी गर्न सक्छु - चीजहरू परियोजनाहरू भित्र विभाजित राखेर - र विश्लेषणहरू थपिएको बोनस हो। एपमा छुटेको कुरा च्याट हो तर गुगल एप्सले त्यसको पूर्ति गर्नुभन्दा बढी गर्छ। DA एक मात्र उपकरण होइन - त्यहाँ Zoho र Wrike र Basecamp आदि छन् - तर मलाई Deskaway धेरै व्यावहारिक थियो - $ 10 - $ 25 - तपाइँको आवश्यकताहरु मा निर्भर गर्दछ र यसको एक सुपर इन्टरफेस पनि छ - के तपाइँले कुनै यस्तो उपकरण प्रयास गर्नुभएको छ?
तपाईंले भिडियो टिप्पणीहरू समावेश गर्नुभएको तथ्यलाई माया गर्नुहोस् 🙂
धन्यवाद आदित्य, म सीस्मिकको ठूलो फ्यान हुँ!
सेप्टेम्बर 5, 2008 बेलुका 12:32 बजे
राम्रो पोस्ट। तपाईंले ओपन सोर्स प्लेटफर्महरू र विकास (ड्रुपल) प्रयोग गरेर दुई कर्मचारीहरूद्वारा निर्मित अर्गानिक रूपमा हुर्किएको एउटा छुटाउनुभयो र एन्टी-टप-डाउन दृष्टिकोणको उत्कृष्ट उदाहरण हो। Blueshirtnation.com, Best Buy को आन्तरिक सामाजिक सञ्जाल। Gary Koelling र Steve Bendt सिर्जनाकर्ता हुन्। केही लिङ्कहरू...
Blueshirtnation मा लेख
तिनीहरू चार्लेन लीको पुस्तक, "ग्राउन्ड्सवेल" मा पनि उल्लेख गरिएको छ।
धन्यवाद! यो धेरै चाखलाग्दो छ जब वास्तविक कर्मचारीहरूले यसलाई सामाजिक सञ्जाल सुरु गर्न आफैंमा लिन्छन्। म यसलाई जाँच गर्न जाँदैछु।